အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံ နှင့် မက်ဟာလာယပြည်နယ်များတွင်ရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့် လူ ၃၂ ဦးသေဆုံး - Xinhua News Agency
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းအာသံပြည်နယ်၌ ရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်ပွားနေသည်ကို ဇွန် ၁၈ ရက်ကတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နယူးဒေလီ ၊ ဇွန် ၁၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်နှစ်ခုဖြစ်သည့် အာသံပြည်နယ် နှင့် မက်ဟာလာယပြည်နယ် (Meghalaya)များတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများကြောင့် ပြီးခဲ့သော နှစ်ရက်အတွင်း လူပေါင်း ၃၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ရကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။အာသံပြည်နယ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့သတင်းစာစောင် (ASDMA)၏ ဖော်ပြချက်အရ ရေကြီးမှုကြောင့် ပြည်နယ်အတွင်း သေဆုံးသူ ၁၃ ဦးရှိကြောင်း ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ခရိုင်ပေါင်း ၂၈ ခုတွင် ရေဘေးသင့်သူပေါင်း ၁.၈ သန်း ကျော်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် မက်ဟာလာယပြည်နယ် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့(SDMAM)မှ တာဝန်ရှိသူများက ပြည်နယ်၌ ပြီးခဲ့သော နှစ်ရက်အတွင်း ရေဘေးကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၉ ဦးရှိကြောင်း ဆိုသည်။
“ ပြည်နယ်အတွင်း ရေကြီးရေလျှံမှုတွေနဲ့ မြေပြိုမှုတွေကြောင့် သောကြာနေ့မှာ အသက် ၆ လသားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ယောက်အပါအဝင် လူ ၁၄ ဦး သေဆုံးသွားတယ် ၊ ဒါကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်အတွင်းမှာ သေဆုံးသူ ၁၉ ဦးထိ မြင့်တက်သွားခဲ့ရတာပေါ့” ဟု SDMAM မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ကဆိုသည်။
အာသံပြည်နယ်တွင်ရေဘေးသင့် ကျေးရွာပေါင်း ၃၀၀ နီးပါးရှိပြီး လူပေါင်း ၁၀၈,၁၀၄ ဦးကို ယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများသို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးထားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့် စိုက်ပျိုးမြေ ၄၃,၃၃၈ ဟက်တာထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပြီး သီးနှံပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ဆိုသည်။ ထို့ပြင် တာတမံများ ၊ ရေလွှတ်မြောင်းများ နှင့် လမ်းအများအပြား ပျက်စီးသွားခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် နရာနြ္ဒာမိုဒီက ရေကြီးမှုအခြေအနေကို အစီရင်ခံတင်ပြရန် နှင့် ဖက်ဒရယ်အစိုးရထံမှ လိုအပ်သောအကူအညီများ အားလုံး ရယူသွားရန် အာသံပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Himanta Biswa Sarma အား ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် လမ်းညွှန်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
32 killed in floods in India’s Assam, Meghalaya
NEW DELHI, June 19 (Xinhua) — Floods in two northeastern states of India, Assam and Meghalaya, have killed 32 people in the past two days, officials said Saturday.
According to an Assam State Disaster Management Authority (ASDMA) bulletin, 13 people were killed in the state, while over 1.8 million people were affected by the ongoing flooding in 28 districts.
Officials at the State Disaster Management Authority of Meghalaya (SDMAM) said 19 people were killed in the state in two days.
“Fourteen people, includingasix-month-old infant, died in the rain-induced floods and landslides in the state on Friday, thus taking the death toll in the past two days to 19,” an official of SDMAM said.
The flooding has affected nearly 3,000 villages in Assam and 108,104 people are taking shelter in relief camps.
Officials said water has inundated 43,338 hectares of cropland and damaged crops. Several embankments, culverts and roads have been damaged.
Indian Prime Minister Narendra Modi on Saturday talked to Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma to enquire about the flood situation and assured all help from the federal government.
lood-affected villagers arrive atasafer place by boat in Hojai district of India’s northeastern state of Assam, June 18, 2022. (Str/Xinhua)
ကမ္ဘာ့တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း လွှမ်းမိုးမှုခေတ် ကုန်သွားပြီဟု ပူတင်ပြောကြား
FIFA စံချိန်စံညွှန်းအားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသော အယ်လ်ဂျီးရီးယားအားကစားကွင်းကို တရုတ်ကုမ္ပဏီက တည်ဆောက်ပေးခဲ့
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား၌ စနေနေ့ည နှောင်းပိုင်းက သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၃ ဦးသေဆုံး ၊ ၁၁ ဦးဒဏ်ရာရ